Lungiselela uvavanyo olukhulu ngekhosi efanelekileyo
Ukuba ukhangele ukungena esikolweni seshishini, izikhulu ezininzi ze-MBA ziyakulindela umgangatho ophezulu we-GMAT. Ngokuqinisekileyo, usenokuba uthathe incwadi ukukunceda uvuke, kodwa mhlawumbi kufuneka ungene ngemvume kwikhosi ukuze uqiniseke ukuba uhamba ngendlela efanelekileyo. Ukuncedisa, sidibanise isikhokelo kwizinto eziphambili ze-GMAT zovavanyo lwe-prep, ngoko unokuqiniseka ukuba uya kuba ulungele i-GMAT - kunye ne-MBA yakho.
Eyona ndawo ingcono kumntu: Kaplan
Abaqeqeshi be-Kaplan baxabiswa kakhulu, kwaye iiklasi zabo ze-GMAT zizinye zezona zithandwa kakhulu kwivenkile. Iikholeji ezilishumi elinesibhozo zokufundisa ngokuvela kwi-klanti ye-Kaplan umcebisi zifakwe kuzo zonke izifundo ze-person-person. Iikhosi zinikwe lonke unyaka kunye nakwiindawo ezininzi.
Isifundo se-Kaplan GMAT sokuvavanya siyakukuvumela ukuba wenze "uvavanyo olupheleleyo" lweemviwo ngosuku ngokuthi uthathe uqeqesho oluzeleyo lwe-GMAT kwiziko lokuvavanya lase-Kaplan, lizaliswe njengoko kuya kuba ngomhla wokuvavanywa kwakho. Ukuthenga kwakho kubandakanya iimvavanyo eziqhelekileyo ezilishumi ezipheleleyo zovavanyo kunye nokufikelela kwiinkcukacha ze-intanethi, kuquka ne-5 000 imibuzo yokusebenza kunye namakhulu ama-tutorials amavidiyo.
I-person-in-person Kaplan GMAT i-prep izifundo ziyi-$ 1,149, ngelixa iikholeji ze-intanethi zi-$ 1,249 kwaye zifumaneke kwi-laptop okanye i-smartphone. Iikhosi ezizimeleyo zi-$ 799 kuphela. Ngokuthenga kwakho, uza kufumana iincwadi ezintathu ze-GMAT zangaphambili kunye ne-MBA yokubakholwa kwamkelwa. Kaninzi "
I-Best Online: PrepScholar
Ngobubele be-Prep Scholars GMAT
I-algorithm ekhethekileyo ye-PrepScholar izakuzenza ngokwezifiso ngokuqhubeka kwakho njengoko ugcwalisa iimvavanyo ze-GMAT kunye neenkomfa endleleni. Uza kuqala nge-60-question question diagnostic GMAT eya kukunika ukujonga ngokucacileyo amandla akho kunye nobuthathaka, indlela onokwenza ngayo iseshoni zakho zokufunda, kunye neenjongo zakho. Inkqubo ye-PrepScholar GMAT isebenza kuyo nayiphi na umfundi, njengoko izinto zifumaneka kwi-core, amazinga aphambili kunye nobuchule.
Ngokuthenga kwakho i-GMAT prep course, uza kufumana isicwangciso somntu ozifunayo, umqhubi wenkqubela phambili, izifundo ezingaphezulu kwama-50, imibuzo engaphezu kwe-1 000 ye-GMAT, i-video tutorials evela kubafundisi beengcali kunye novavanyo olude olude oluqhelekileyo kwiifom ye-computer eguquguqukayo Ndiza kubona ngosuku lokuhlola. Ezinye izixhobo ze-PrepScholar GMAT zifumaneka kwisiqwenga se-$ 99, ngelixa i-GRE prep izifundo ezizimeleyo ziza kuhlawula i-$ 399 kwaye i-GRE ehamba phambili i-GR inthanethi ibiza i-$ 249. Izaphulelo zeqela elincinci kunye nokufundiswa kwe-GMAT yangasese nazo ziyafumaneka. Ukuthenga kwakho kufaka isiqinisekiso sokunyuka kwamanqaku angama-60 kunye nesilingo samahhala semini emihlanu. Kaninzi "
Ixesha elide kakhulu: UkuPhononongwa kwePrinceton
Uhlolo lwePrinceton Uvavanyo lwe-GMAT lweprint prep lubandakanya iiyure ezongezelelweyo zokufundiswa kwamagumbi okufundela, iikholeji zevidiyo kunye nenkxaso ye-intanethi kune-average, eyenza ukuba ibe yinto efanelekileyo ukuba ufuna ukukhulisa amanqaku akho ngegama elibanzi okanye ukuba unokufunda ixesha elide. Iikhosi ziquka iiyure ezingama-27 zokufundisa, izifundo ezingaphezulu kwama-5,000 kunye nemibuzo yokusebenza, impendulo ye-GMAT ye-essay, ubude obude obude obude be-GMATs obonelelwe ngendlela efanelekileyo, kunye ne-guaranteed increase score (okanye imali yakho yokufundiswa ibuyiswe).
Ukusetyenziswa ngokuzenzekelayo kwe-Princeton Ukuhlolwa kwe-GMAT izixhobo eziphambili zexabiso zibiza i-$ 299, ngelixa ubude obude be-GMAT prep izifundo zi-$ 1,199. Umntu ongeyena mntu u-GMAT wangaphambili uqeqesho lufumaneka kwi-Princeton Review ye $ 1,299. Inkqubo yokufundisa i-GMAT yangasese ne-Princeton Review instructor ibiza i-$ 1,800.
Uninzi olunzulu: I-Veritas Prep
Ngobubele beVeritas Prep
I-Veritas Prep yintlangano yeflethi ye-GMAT prep, kwaye akumangalisi ukuba kutheni: Abaqeqeshi babo baphezulu-notshi, kwaye imibuzo yabo yokusebenza ixutyushwa kakhulu kwizinto ezintle kwaye zinokwenene kwishishini. Ibhanki yabo yombuzo oyi-GMAT iya kukuvumela ukuba wenze imibuzo ebangela ukuba usebenzise izakhono ezithile ezifunekayo ukuze usebenze, kunye nokuthengwa kwakho kwenkqubo yokuzifundela i-$ 850, i-GMAT prep class ye-$ 1,650 okanye iprogram ye-GMAT yokufundisa i-$ 2,650. ukufikelela kule mibuzo yesi-5 000 kunye ne-homework work help.
Unako ukufikelela kwiinkonzo ze-Veritas Prep GMAT nanini na kunaliphi na iqonga okanye idivaysi, kwaye umsebenzisi uqwalasela ngokukhethekileyo. Iikholeji ezikholayo zifumaneka kwiiklasi ezungeze i-US okanye ngokupheleleyo kwi-intanethi. Ukuthenga kwakho kufaka isiqinisekiso sokunyuka kwamanani. Kaninzi "
Udidi oluphezulu kakhulu lweZiko lokuQiniseka: Abaphathi beeTestmasters
Izifundo ze-Testmasters ze-GMAT prep ziza neziqinisekiso eziphezulu kakhulu zamanqaku. Ukuba umgangatho wakho we-GMAT awuphuculanga ubuncinane ngamanqaku angama-100 emva kokuba uthathe ikhosi, ungathatha elinye iklasi elide elipheleleyo ngokukhululeka. (Kufuneka wenze yonke imisebenzi yakho yasekhaya, nangona kunjalo, okanye isiqinisekiso asisebenzi.)
I-Testmasters inikeza izifundo ze-GMAT zeklasini eziqala kwi-$ 899. Ikhosi nganye iquka ii-Testmasters ze-GMAT eziphambili (iimpapu ezingaphezu kwe-1,200) kunye nekopi yesiGqeba esisemthethweni kwi-GMAT Review. Iiklasi zinikezwa ngamafomu ahlukeneyo, ukusuka kwiikhosi zamagumbi okufundela kwilizwe lonke ukuya kwi-private tutoring, kwiikhompyutha ze-GMAT zangaphambili kunye neeklasi zeklasi eziqhelekileyo ongazithatha kunye nabahlobo, osebenza nabo okanye ofunda nabo eklasini yokuphuhlisa. Kaninzi "
Eyona bhetele kwiBhajethi: iMagoosh
I-Magoosh inikezela ezininzi izixhobo eziphambili ze-GMAT ngaphandle kwenkqutyana yeendleko zezona zininzi zeeprogram zokulungiselela ukuhlola. Ngama-149 nje kuphela e-$ 99 kwi-premium prep, i-$ 129 yezibalo kunye nokudibanisa ukuqiqa ngokubodwa, kunye ne-$ 680 ye-Magoosh ngaphambi kokuba ufumane iiyure zokufundisa, uza kufumana ukufumana uncedo lwe-imeyile, iishedyuli zokufunda, ezininzi zezifundo zevidiyo, amakhulu emisebenzi yokuphendula imibuzo iinkcazo, izixhobo zokulungisa izixhobo kunye nezifundo zokwakha izakhono.
Iphakheji ngalinye liquka isiqinisekiso esithile semali kunye nemali eyahlukeneyo yodwa. Iphakheji ye-premium iquka ezimbini i-GMAT eziqhelekileyo eziqhelekileyo ezilungiselelwe iingcali zeMagoosh. Iphepha ngalinye leMagoosh GMAT prep likuvumela ukuba ufinyelele umxholo wonyaka opheleleyo. Kaninzi "
Eyona ndlela ihamba phambili kubaPhakamileyo abaPhakamileyo: iManhattan Prep
Ngobubele beManhattan Prep
Ukuba ungumfundi okhuselekileyo ufuna ukufikelela kwinkqubo ephezulu ye-MBA, okanye ukuba ufuna ukufaka amanqaku e-scholarship epheleleyo kwisikolo seshishini kwaye kufuneka nje ukuphucula amanqaku akho ambalwa, i-Manhattan Prep ngumthombo ontle yakho ye-GMAT prep. Banikela ngeentlobo ezahlukeneyo, kuquka i-GMAT Boot Camp, enika ii-35 zokufundisa kwiiveki ezimbini nje ngee-2,650 zamaRandi. Oku kungcono kuwe ukuba ungumfundi okhawulezileyo onenjongo zamaphuzu aphezulu.
Kwakhona, kwiikhompyutheni ze-GMAT zangaphambili zokuvavanya, u-$ 1,299, uza kufumana zonke izikhokelo zamanqanaba e-Manhattan Prep, kubandakanye nalabo abakhethiweyo ngokukodwa abafundi abaphezulu, njenge-Advanced Quant. Unokuya kwiiseshoni zokuqala kwanoma yiyiphi inqanaba likaManhattan Prep GMAT mahhala, ngoko akudingeki wenze isigqibo ngokukhawuleza. Kaninzi "
Inkxaso ephezulu ye-Intanethi: I-Economist
I-Economist i-GMAT prep izifundo ziquka inkqubo ekhompyutheni ye-intanethi ehambelana nenkqubela yakho njengoko ugcwalisa imibuzo engama-5 000 ye-GMAT kunye nokuhlolwa kwexesha elide. Kukho neendidi ezahlukeneyo zokufundiswa kwevidiyo eziza kukuhamba ngezakhono ezisisiseko oza kuzenza ukuze ufunde kakuhle. Inkqubo ye-GMAT prep kwi-Economist yenza umsebenzi obalaseleyo wokubonelela ngenkxaso kwi-intanethi kubathengi. Ngokuthenga kwakho, uya kufumana uncedo olufumaneka kwi-intanethi naliphi na ixesha olilifunayo, ingqalelo yabucala kubafundisi beengcali, kunye nempendulo eyakhelwe ngabanye kwiimvavanyo ze-GMAT.
Iinyanga ezintandathu zokufikelela ukugqiba i-GMAT prep ixabisa i-$ 799 kwaye iquka iimvavanyo ezi-3 ezide ezipheleleyo zokuqhuba iimvavanyo, ii-AWA ezine-personalized person scorings, 50 zokubuza imibuzo kunye ne-50-point point point. I-premium prep iquka iiseshoni ezithandathu ukuya kwinye, iiseshoni ezi-6 ze-AWA ezenziwe ngabantu, iimpawu ezi-5 zokufundisa, kunye nokuphucula amanqaku angama-70 okuqinisekisa i-$ 899. Zomibini zezi zixhobo zifikeleleka kwiinyanga ezintathu. Nge $ 1,099, uza kufumana iinyanga ezintandathu zokufikelela kwimisebenzi eyisithupha epheleleyo ye-GMATs, imibuzo engenamkhawulo wokubuza umbuzo, i-essay scorings kunye neeseshoni ezisibhozo zodwa. Kaninzi "
Ulwabiwo-mali oluthile luchaphazela njani ootitshala
Bhiyozela Usuku Lomhlaba: Ungathini Umntu onokutshintsha ihlabathi